Ch 3 Mark – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Marka / Ch 3 Mark
3:1 Ary indray, dia niditra tao amin'ny synagoga. Ary nisy lehilahy anankiray teo, izay nanana maty tanana.
3:2 Ary izy ireo dia niaro azy izy, mba hahitana raha mety manasitrana ny Sabata, ka mba hiampangany Azy.
3:3 Ary hoy izy tamin'ilay lehilahy maty tanana, "Mitsangàna eo afovoany."
3:4 Ary hoy Izy taminy:: "Mety va ny manao soa amin'ny Sabata, sa ny manao ratsy, mba hanome ny fahasalamana any amin'ny fiainana, na handringana?"Fa izy ireo mangina.
3:5 Ary nijery manodidina azy tamin'ny fahatezerana, rehefa tena Malahelo ny fahajamban 'ny fony, dia hoy izy tamin-dralehilahy, "Mandrosoa ny tananao." Ary omena azy, ary sitrana ny tànany taminy.
3:6 Ary ny Fariseo, mandeha mivoaka, niaraka tamin'izay dia niara-nihevitra tamin'ny Herodiana izy hanohitra azy, ny fomba izay hamonoany Azy.
3:7 Ary Jesosy mbamin'ny mpianany niala teo ka nankany amin'ny ranomasina. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka Azy avy tany Galilia sy Jodia,
3:8 ary avy tany Jerosalema, ary avy any Edoma sy ampitan'i Jordana. Ary ireo manodidina an'i Tyro sy Sidona, rehefa nandre ny zavatra nataony, nanatona Azy amin'ny vahoaka betsaka.
3:9 Ary Izy nilaza tamin'ny mpianany mba hanisy sambokely ho mahasoa azy, noho ny vahoaka, fandrao mifanety aminy ireo.
3:10 Fa nahasitrana maro, fa tahaka ny ankamaroan'izy ireo rehetra nanana ratra dia maika aminy mba hikasika azy.
3:11 Ary ny fanahy maloto, nony nahita Azy, lavo niankohoka teo anatrehany. Ary ny vahoaka niantso, nanao hoe:,
3:12 "Ianao no Zanak'Andriamanitra." Ary dia nananatra azy mafy, fandrao hanao izay hahafantarana Azy.
3:13 Ary niakatra tao an-tendrombohitra, dia niantso ny tenany ireo izay sitrapony, dia nanatona Azy.
3:14 Dia nanao izany ny roa ambin'ny folo lahy ho azy, ary toy izany koa mba haniraka azy hitory.
3:15 Ary nanome azy fahefana mba hanasitrana ny aretina,, ary ny demonia:
3:16 ary nametraka tamin'ny Simona Petera ny anarana;
3:17 ary koa dia nametraka tamin'ny Jakoba, zanak'i Zebedio, sy Jaona, rahalahin'i Jakoba, ny anaran 'Boanerges,'Izany, 'Zanaky ny Varatra;'
3:18 ary Andrea, ary Filipo, sy Bartolomeo, ary Matthew, ary Thomas, ary Jakoba, zanak'i Alfeo, ary Thaddeus, sy Simona Kananeana,
3:19 ary Jodasy Iskariota, ilay namadika Azy.
3:20 Dia nandeha tany amin'ny trano, ary ny vahoaka nivory indray, loatra izy ireo ka tsy afaka nihinan-kanina.
3:21 Ary rehefa ny efa nandre izany, dia nivoaka hihazona Azy. Fa hoy izy ireo:: "Satria efa lasa adala."
3:22 Ary ny mpanora-dalàna izay nidina avy tany Jerosalema hoe:, "Satria manana Belzeboba, ary noho Ny lohan'ny demonia no no amoahako ny demonia. "
3:23 Ary rehefa niantso azy ireo, dia niteny taminy fanoharana: "Hataon'i Satana ahoana no famoaka an'i Satana?
3:24 Fa raha misy fanjakana miady an-trano, fa ny fanjakana dia tsy afaka ny hitsangana.
3:25 Ary raha misy trano miady an-trano, izany trano izany dia tsy mahajanona.
3:26 Ary raha Satana no mitsangana hanohitra ny tenany, izy fa tsy hisaraka, ary dia tsy ho afaka hijoro; fa dia tonga ny farany.
3:27 Tsy misy olona mahay handroba ny entany ny olona mahery, dia niditra tao an-trano, raha tsy mamatotra aloha ny mahery, ary avy eo dia handroba ny tranony.
3:28 Amen Lazaiko aminareo, fa ny fahotana rehetra ho famelan-keloka ny zanak'olombelona, ary ny fitenenan-dratsy izay dia efa niteny ratsy.
3:29 Fa iza no efa niteny ratsy manohitra ny Fanahy Masina dia tsy hahazo famelan-keloka any amin'ny mandrakizay; fa izy dia ho meloka ny amin'ny heloka mandrakizay. "
3:30 Fa hoy izy ireo:: "Izy Azom-panahy maloto."
3:31 Ary ny reniny sy ny rahalahiny tonga. Ary nijoro teo ivelany, dia naniraka ho any aminy, niantso azy.
3:32 Ary ny vahoaka nipetraka manodidina Azy. Ary hoy izy ireo taminy, "Indro, ny reninao sy ny rahalahinao ny any ivelany, mitady anao. "
3:33 Ary mamaly azy, hoy izy:, "Iza moa no reniko sy ny rahalahiko?"
3:34 Ary nijery manodidina amin'ny olona izay nipetraka manodidina azy, hoy izy:: "Indro, ny reniko sy ny rahalahiko.
3:35 Fa na iza na iza no nanao ny sitrapon 'Andriamanitra, dia izy no rahalahiko, sy anabaviko ary reniko. "